China Alloy structural steel စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
1၊ နိုင်ငံခြား ပေးသွင်းသူများသည် အရည်အသွေး ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပြည်ပ တင်သွင်းသူ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (AQSIQ) ကို ရယူရန် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။
2၊ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်သည် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ စစ်ဆေးရေးလက်မှတ် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းကို ၀န်ခံရပါမည်။တရုတ်စစ်ဆေးရေးနှင့် quarantine ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံခြားတွင် အေဂျင်စီများစွာရှိသည်။နိုင်ငံခြားမှာ အဖွဲ့အစည်းတွေ မရှိရင် စစ်ဆေးရေးပြီးရင် ခရီးဆုံး ဆိပ်ကမ်းကို ထောက်ပံ့ဖို့ ပြောလေ့ရှိတယ်။.
နိဒါန်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် အသုံးပြုသည့် သံမဏိကို ရည်ညွှန်းပြီး အချို့သော သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ ပမာဏတစ်ခု သို့မဟုတ် အများအပြား ပါဝင်သည်။အလွိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသံမဏိတွင် သင့်လျော်သော မာကျောမှုရှိပြီး၊ သင့်လျော်သောသတ္တုအပူကုသမှုပြီးနောက်၊ သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံသည် တူညီသော sorbite၊ bainite သို့မဟုတ် အလွန်ကောင်းမွန်သော pearlite ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် မြင့်မားသော ဆန့်နိုင်စွမ်းအားနှင့် အထွက်နှုန်းအချိုးရှိသည်။(ယေဘူယျအားဖြင့် 0.85 ဝန်းကျင်)၊ ပိုမာကျောမှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု နှင့် ခံနိုင်ရည်-ကြွပ်ဆတ်သော အကူးအပြောင်း အပူချိန် တို့ကို ပိုမို ကြီးမားသော အပိုင်းဖြတ်ပိုင်း အတိုင်းအတာဖြင့် စက်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပစ္စည်း 20Mn2၊SMn420,1524,20Mn5,SMn433,1330,1335,1340,40B,50B,50B50,81B45,38MnB5,20X,5120,35X,40X၊41,194,118, 4125, 4130, 4140, 4135, 6120, 6140, 6150, 5152, 3140H, 3316, 3325, 3330, etc.
အဝိုင်းဘား: အချင်း: 20-350mm, အရှည်: 1-12000mm, သို့မဟုတ်လိုအပ်သလို။
အပေါ်ယံ ပန်းချီ၊ သုတ်ခြင်း၊ ပေါလစ်တိုက်ခြင်း၊ အနက်ရောင်အောက်ဆိုဒ်၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော သံချေးတက်ဆီ သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို ပြုလုပ်ပါ။
လျှောက်လွှာ ယာဉ်များ၊ အင်ဂျင်များနှင့် စက်များအတွက် တည်ငြိမ်ပြီး အင်တိုက်အားတိုက် အလေးပေးထားသော အစိတ်အပိုင်းများ။ပိုကြီးသော အပိုင်းများ၊ crankshafts၊ gears စသည်တို့အတွက်
နောက်တစ်ခု: အသီးတွေ သံမဏိ